Facebook , Viber, Messger သုံးရငျး ထောငျနနျးမစံခငျြရငျ ဒါလေးဖတျထားပါ – စှယျစုံသုတ
Facebook , Viber, Messger သုံးရင်း ထောင်နန်းမစံချင်ရင် ဒါလေးဖတ်ထားပါ
Facebookသုံးသူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ပုဒ်မ ၆၆
ပုဒ်မ၆၆။ မည်သူမဆို အောက်ပါပြုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှု …!ထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင်
ထိုသူအား ၃နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ ၊ ဒဏ်၂ရပ်လုံးဖြစ်စေချမှတ်ရမည်။ပုဒ်မ၆၆(က)။
ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ယက်အတွင်းသို့ ယင်း၏ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ်စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသူ၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ ဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်ခြင်း၊
စံချိန်စံညွှန်း သတ်မှတ်ချက်ကိုဖြစ်စေ၊ မူလအနေ အထားကိုဖြစ်စေ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်ဆီးခြင်းနားရှင်အောင်ပြောရရင်ပုဒ်မ၆၆(က)facebook /gmail ကို ခိုးယူခြင်းပါ။ Passwordပြောင်းခြင်း / gmailပြောင်းခြင်းပါ။
ပုဒ်မ၆၆(ခ)။ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ကိုထိခိုက်စေရန် ဗိုင်းရပ်စ် ( သို့မဟုတ် )အခြားနည်း နဲ့ ဝင်ရောက်စေခြင်း…!!
နားရှင်းအောင်ပြောရရင်~~~ပုဒ်မ၆၆(ခ)link အတုတွေကတဆင့် အချက်အလက်passwordခိုးယူခြင်းပါ။#ပုဒ်မ၆၆(ဂ)။
ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ကိုသုံး၍ #ငွေကြေးနဲ့ပစ္စည်းကိုခိုးယူခြင်း၊#လိမ်လည်ခြင်း၊#အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ်#
အသရေဖျက်ခြင်း၊ နှောက်ယှက်ခြင်း၊မလျှော်သြဇာသုံးခြင်း ၊ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊မရိုးဖြောင့်သောနည်းဖြင့်ပြန်လည်ဖြန့်ဝေခြင်း
နားရှင်းအောင်ပြောရရင်~~~ပုဒ်မ၆၆(ဃ)facebookက တဆင့်လူတစ်ယောက်ကို ဆဲဆို ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊mentionခေါ်ဆဲခြင်း၊
ပုံတွေသုံး မဟုတ်သတင်းရေးခြင်း၊ ပျက်ဆီးစေမှုနဲ့ tag တွဲခြင်း၊သူတစ်ပါး တင်ထားသော Post ကို By Name ဖြင့် Screen Shot ပြန်ယူတင်ခြင်း ..,
Share အဖြစ်တင်ခြင်း၊မရိုးသားသည့်သဘောဖြင့်Photo Commentပြုလုပ်၍ မန့်ခြင်း…!စတဲ့ အပြုအမူတွေ ကျူးလွန်ရင်
ကိုယ်တိုင်တရားဆွဲစရာမလိုပဲ ကြားလူတစ်ယောက်ကအမှုဖွင့်ပေးရုံ နဲ့ အာမခံ မရှိထောင်၃နှစ်ချလို့ရပါတယ်။
Screenshot သက်သေအထောက်အထားနဲ့ ကျိန်းသေထောင်ကျအောင် ချလို့ရတယ်။ပုဒ်မ ၆၆ (ဃ)ကို
ယနေ့ facebookပေါ်မှာကျူးလွန်နေသူတွေ အများကြီးပါ။ချမှတ်ပြီးသား ဉပဒေအတွင်းမှာ ဟောင်းသွားတာမရှိဘူး…!
ဥပဒေ မပြုရသေးခင်သာနောက်ကြောင်းပြန်အရေးယူမရတာ။တကယ်တမ်းဥပဒေကို နားလည်သူကလူတစ်ယောက်ကို
By name တပ် facebook ပေါ်စော်ကားဖို့နေနေသာ Share တာတောင် သတင်း ပိုစ့် ၊ပညာပေး ပိုစ့်လောက် shareရဲတာComment ပေးတာတောင် သတိထားပေးကြရတယ်။
ပုဒ်မ ၆၆ သိပ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်.., သတိထား..!အသရေဖျက်မှု(ပုဒ်မ ၅၀၀) နဲ့ ၆၆ဃ ဥပဒေ၊ပုဒ်မ ၅၀၀ နဲ့ ၆၆ဃ ဥပဒေကို လုံးဝမသိသေးသော သူများနှင့် နားမလည်သောသူများအား သိရှိစေရန် ပထမဆုံး သိထားရမှာက ပါးစပ်နဲ့ပြောတဲ့ အသရေဖျက်မှုဟာ ရိုးရိုး ပုဒ်မ ၅၀၀ ဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ ပုံနှိပ်မီဒီယာပေါ် ရောက်သွားပြီ
သတင်းစာ ဂျာနယ် မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ပါလာပြီဆိုရင် ပုဒ်မ ၂၅ သတင်းမီဒီယာ ဥပဒေပုဒ်မ ပုဒ်မ၂၅ ထပ်တိုးပါတယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာ ဖေ့ဘုတ် အွန်လိုင်းပေါ်ထိ ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၆၆ဃ ဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါကိုအရင်ဆုံး သိထားကြဖို့လိုပါတယ်။
ပါးစပ်ကပဲပြောပြော စာနဲ့ပဲပြောပြော အွန်လိုင်းပေါ်ရောက်တဲ့အဆင့်ရောက်ရင်တော့ အသရေဖျက်မှု သတ်မှတ်ဖွင့်ဆိုချက် ရာဇသတ်ဥပဒေပုဒ်မ ၅၀၀ နဲ့စပါတယ်။အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ပုဒ်မ ၅၀၀/ ပုဒ်မ ၂၅/ ပုဒ်မ ၆၆ဃ ဆိုပြီး ကွဲပြားသွားတာကို သိရပါမယ်။အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ရိုင်းစိုင်းသည့် ကောမန့်များပေးခြင်းChat box တွင် ရိုင်းစိုင်းသည့်စကားများပြောဆိုခြင်းအုပ်စုဖွဲ့၍ ရိုင်းစိုင်းသည့်
စကား များ ပြောဆို ခြင်း များသည် ဆက်သွယ်ရေး ပုဒ်မ ၆၆ဃနှင့်တိုက်ရိုက်အကြုံး ဝင်တယ်။ဟုတ်ပြီ နောက်ထပ် ဘာတွေမတူသေးလဲဘာတွေကွဲလွဲသေးလဲ ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
လူတစ်ယောက်က လူတစ်ယောက်ကို ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၆၆ဃ နဲ့ဆွဲတဲ့အမှုကို ဒါလဲ အသရေဖျက်မှုပဲဆိုပြီး ပုဒ်မ ၅၀၀ နဲ့ ပြစ်ဒဏ်သတ်မှတ်လို့ မရသလို ၆၆ဃ ကို ပုဒ်မ ၅၀၀ အသရေဖျက်မှုနဲ့ပဲ တရားလိုက ဆွဲချင်ဆွဲလို့ရပါတယ်။ဒီလိုပြောင်းလဲဖို့ တရာလိုရဲ့ သဘောဆန္ဒနဲ့ပဲ ပြောင်းလွဲဆိုလို့ ရပါတယ်။ပါးစပ်ပြော စာပြော အွန်လိုင်းမှာပြော တဲ့ပြစ်မှုတွေကို အသရေဖျက်မှုရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၄၉၉ နဲ့ပဲ အကြုံးဝင်မဝင် ၄၉၉ ပါ ပြစ်မှုအင်္ဂါရပ်များအရ ညီမညီ စစ်ဆေးရပါတယ်။
၁။ ၆၆ဃ ဟာ (ရဲအရေးပိုင်) ရဲကအရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိပြီး အသရေဖျက်မှု ဥပဒေပုဒ်မ ၅၀၀ ကတော့ (ရဲအရေးမပိုင်) ရဲကအရေးယူပိုင်ခွင့် မရှိပါဘူး။
၂။ ပြစ်ဒဏ်မတူပါဘူး ။ပြစ်မှုထင်ရှားရင်
၆၆ဃ = ထောင်ဒဏ်သုံးနှစ်အထိ (သို့မဟုတ်) ငွေဒဏ် (သို့မဟုတ်) ပြစ်ဒဏ်နှစ်ရပ်စလုံး။ပုဒ်မ ၅၀၀ = ထောင်ဒဏ် နှစ်နှစ်အထိ(သို့မဟုတ်) ငွေဒဏ် (သို့မဟုတ်) ပြစ်ဒဏ်နှစ်ရပ်စလုံး ကျခံရမှာဖြစ်ပါတယ်
(ပထမဆုံး ပုဒ်မ၅၀၀ကို ၈မိုင်မှာ ချောစကီးအားယာဉ်ပေါ်မှ ဆဲရေးသွားသူအားစတင်noticeထုပ်အရေးယူခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယအကြိမ် ကျောက်ဆည်မှာကွမ်းခိုးသူတွေတရားစွဲအရေးယူတဲ့အခါ တရားခံတွေနဲ့ပါလာတဲ့ယောက်ဖဆိုသူက လူပုံလည်ကျမကိုလက်ညိူးထိုး ပမာမခန့်ပြောလို့တခါ အဲ့နေရာက ရဲအရာရှိတွေသက်သေထားပြီး အသရေဖျက်မှုနဲ့စွဲပါတယ်။တတိယအကြိမ် ကျမနောက်ကွယ်စာဖြင့် အပြန်အလှန်အပုတ်ချအတင်းပြောနေတာမိလို့ပုဒ်မ၅၀၀နဲ့ စွဲဘို့ ပြင်ဆင်ထားပါသေးတယ်။)
၃။ အသရေဖျက်မှုကို အကြောင်းပြုပြီး ပုဒ်မ ၅၀၀ နဲ့ဆွဲရင် အာမခံပေးရမယ့်အမှုဖြစ်ပြီး အသရေဖျက်မှုကို အကြောင်းပြု၍ ၆၆ဃ နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင် အာမခံမပေးနိုင်တဲ့အမှု ဖြစ်သွားပါတယ်။ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပဒေ ဒုတိယဇယားအရ သုံးနှစ်နှင့်အထက် ပြစ်ဒဏ်သင့်မယ့် အမှုများကို အာမခံမပေးနိုင်တဲ့ အမှုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
၄။ ၆၆ဃ ဟာ ရဲအရေးပိုင်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားတာကြောင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း သိရှိသူ မည်သူမဆို တိုင်ကြားနိုင်ခွင့်ရှိပြီး
ပုဒ်မ ၅၀၀ မှာတော့ နစ်နာသူ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်သာလျှင် တိုင်ကြားဆွဲဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။မပိုင်ရင်ခြင်မရိုက်နဲ့အလဟဿ အသားနာတယ်…..
ပိုင်ရင် မြွေခေါင်းတက်ဖမ်း မလှုပ်နိူင်မှ ရိုက်ပါ….။
ဒီလောက်ဆိုရင် တီးမိခေါက်မိရှိလောက်ပြီ ထင်ပါတယ် ဘာပဲပြောပြော သိထားတော့ ငပိကြော်တွေဘာတွေ ကြိုပြီးပြင်ဆင်နိုင်တာပေါ့…